Edere site Tranquillus | Feb 1, 2021 | Na weebụ
Usoro usoro iwu nke obodo: ịgbasa mmekọrịta ohuru
Iwu, bipụtara na Jenụwarị 28, 2021 na Journal Journal, nyochaa mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke a ga-asọpụrụ mgbe ndị mmadụ na-eyighị ihe mkpuchi.
A na-edozi ebe a dị anya na mita 2 na ebe niile na ọnọdụ niile. Emeziri usoro iwu mba.
Ya mere, na ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ ga-asọpụrụ, mgbe ha na-eyighị mkpuchi, anya nke ọ dịkarịa ala 2 mita site na ndị ọzọ (ndị ọrụ ndị ọzọ, ndị ahịa, ndị ọrụ, wdg). Ọ bụrụ na enweghị ike ịkwanyere anya nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke mita abụọ, iyi mkpuchi bụ iwu. Ma kpachara anya, ọbụlagodi na nkpuchi, a ghaghị ịkwanyere ebe dị anya. O pere mpe otu mita.
Achọrọ ka ị gwa ndị ọrụ banyere iwu ịgbasapụ ọhụrụ a.
N'ime ime ụlọ mkpuchi, ị ga-ahụ na ị na-asọpụrụ nke anụ ahụ, ọ dịkarịa ala otu mita jikọtara ya na mkpuchi. Ọ bụrụ na ha ga-ewepụ ihe nkpuchi ha, protocol na-enye ihe atụ nke ịsa ahụ, ndị ọrụ ga-asọpụrụ ogologo nke mita 2 n'etiti ha.
National protocol: "izugbe ọha na filtration karịrị 90%" nkpuchi
Ikpuchi nkpuchi na-abụrịrị iwu
Usoro nke obodo: ịwepu ọhụụ, nkpuchi 1 nkpuchi na ventilashion kwa awa July 10th, 2021Tranquillus
gara agaNdi nkwekorita ndi mmadu nke n’eme ugwo olu na-emetuta ndi oru achupuru tupu etinye ya aka?
-esonụAchọrọ m ịzụ, mana olee ebe m ga-amalite?
Nnwale CyberEnJeux: ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 300 zụrụ azụ na cybersecurity site na imepụta egwuregwu
Nlele nke Diversity na Index Index na ụwa ọkachamara: nzaghachi